Itoophiyaatti waggoota 40 keessatti namootni Miliyoonni 74 HIVn dhiiga isaanii keessatti argameeraa? – ኢትዮጵያ ቼክ
Itoophiyaatti waggoota 40 keessatti namootni Miliyoonni 74 HIVn dhiiga isaanii keessatti argameeraa?
Guyyaa kaleessaa toorri Yutuubii ‘Fidel Media ፊደል ሚዲያ’ jedhamu “Itoophiyaatti waggoota 40 darbanitti namootni Miliyoona 74 ol HIV Eedsiidhaan qabamaniiru. Kunneen keessaayis Miliyoonni 36 yookiin walakkaatti kan siiqan du’aaf saaxilamaniiru” jechuun gabaasera.
‘Fidel Media ፊደል ሚዲያ’ gabaasa isaa kanaaf Waajjira Ittisaafi To’annoo HIV Eedsii Magaala Finfinnee wabeeffate.
Itoophiyaa Cheek dhugummaa odeeffannoo kanaa mirkaneeffachuuf Waajjira Ittisaafi To’annoo HIV Eedsii Magaala Finfinneetti Daayrektara Sagantaa kan ta’an Sistar Fallaqach Andaargee haasofsiisee jira.
Isaanis “ragaan himame sirrii miti. Nuti ragaa akkasii hin laanne” jechuun Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
Gama biraatiin lakkoofsichi akka malee olkaafamee kan himame ta’uu kan himan Waajjira Ittisaafi To’annoo HIV Eedsii Federaalaatti Daayrektarri Daayrektoreetii Qunnamtii Ummataafi Komunikeeshinii Obbo Daani’el Batira, “yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti lammiileen Kuma 600 ol HIVn dhiiga isaanii keessatti argama” jedhaniiru.
Dabalataan sadarkaa biyyaatti waggaa waggaan namootni 11,000 ol HIV fi dhibeewwan hidhata qabaniin yemmuu du’an namootni haaraan Kumni 10 immoo vaayirasichaan akka qabaman Obbo Daani’el Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
HIV Eedsiin Itoophiyaa keessatti erga argamee eegalee lakkoofsi namoota vaayirasichi dhiiga isaanii keessatti argameefi lubbuun darbe meeqa akka ta’e kan gaafanne yemmuu ta’u tilmaama ragaa kanaa ammatti ofharkaa akka hin qabne dubbatan.
Gama biraatin Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa HIV Eedsiin erga argamee waggoota 40 as namootni Miliyoonni 79.3 vaayirasichi dhiiga isaanii keessatti argamuusaafi namootni Miliyoonni 36.3 immoo sababa vaayirasichaan lubbuun darbuu hima.
Bara faranjootaa darbe (2020) lakkoofsi namoota HIV Eedsiin dhiiga isaanii keessatti argamuu Miliyoona 37 akka ta’es ragaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa agarsiisa.